The Eco Floor - Download Facebook Videos - GenFK.com
The Eco Floor
Attractive flooring says alot about your home or business ......
Vinyl Floor အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသလား။
ဘယ်သူမဆို ကြမ်းခင်းခင်းပြီး သုံးလေးငါးနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ ပရိဘောဂေတွေနေရာချပြီးတော့မှ စိတ်ရှုပ်အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး ပြောင်းရွှေ့ပြင်ဆင်ဖို့ မလုပ်ချင်ကြတော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ ရေရှည်အသုံးခံပြီး ပြန်လည်ကြွတက်ခြင်းမရှိပဲ ကြမ်းပြင်နဲ့တစ်သားတည်းလိုဖြစ်နေတဲ့ ဗီနိုင်းကြမ်းခင်းကို ရွေးချယ်ကာအသုံးပြုလာကြပါတယ်။
အိမ်အတွက် ရုံးခန်းအတွက် ရွေးချယ်ဝယ်ယူရာမှာ လူတော်တော်များများဟာ ရေစိုခံဖို့ ၊ ဆက်ကြောင်းတွေဟကွဲကြောင်း မဖြစ်လာဖို့ ၊ ခြမကိုက်ဖို့နဲ့ ရေရှည်ခံဖို့အတွက် ဦးတည်ကာ မိမိတို့အသုံးပြုမယ့် ကြမ်းခင်းအတွက် ရွေးချယ်စဉ်းစားလာကြပါတယ်။
The Eco Floor မှ မိမိတို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်ရယူထားသော ISO အသိမှတ်ပြု လက်မှတ်များအပြင် Eco friendly award များရရှိထားတဲ့ Dynoflex Vinyl floor Tiles တွေ နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Dynoflex Vinyl Floor ဆိုတာ အိမ်ခန်း ၊ ရုံးခန်း နှင့် ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာ ရေရှည်အသုံးပြုလို့ရနိုင်ဖို့ ပိုမိုကျစ်လစ်အောင် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Vinyl floor PVC ကြမ်းခင်းအမျိုးအစားတွေပါ။
ခေတ်စနစ်အရ အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကို ချိန်ထိုးပြီး စီမံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Vinyl Floor တွေရဲ့ အဓိကအားသာချက်ကတော့ အနင်းခံပြီး ပြန်လည်ကြွတက်ခြင်း ဆူညံသံများထွက်ပေါ်မလာခြင်းမရှိပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ လူအသွားလာများတဲ့ Shopping Mall ကြီး တွေမှာတောင် အသုံးပြုခဲ့တာမို့ အနင်းခံအကြမ်းခံတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်အသွေးမျိုးစုံ ထုတ်လုပ်ထားတာမို့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အရောင် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းများဖန်တီးနိုင်တာကတော့ သူများထက်ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ ကြမ်းပြင်ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနိုင်ပါပြီ။
ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ကျောက်ဂွမ်းမှုံ့များ၊ ဖေါ့များမပါဝင်တဲ့အတွက် အနံ့ဆိုးများစုပ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့အတွက် အခန်းလုံများအတွက် အနံ့စုပ်ယူထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက် အောက်သိုးသိုးအနံ့တွေထွက်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဆက်ကြောင်းတွေထဲ ရေမ၀င်နိုင်အောင် Coating တစ်ထပ်သုတ်ပေးထားတာမို့ ပြောင်လက်တောက်ပစွာ သင့်ကြမ်းခင်းက အမြဲရှိနေမှာပါ။
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကြမ်းခင်းပြားတွေဟာ ခြကိုက်ဖို့ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါ။
အိမ်မှာအသုံးပြုရင်း ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်ဆိုရင် အရောင်မှိုင်းသွားခြင်းမရှိပဲ ထာဝစဉ်သစ်လွင်တဲ့ အရောင်အသွေးနဲ့ သင့်ရဲ့အိမ်ဂေဟာရဲ့ အလှကို ပံ့ပိုးပေးနေမှာပါ။
နယ်မြို့များအတွက် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်လိုသူများ နှင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ Vinyl floor tiles များ ၀ယ်ယူခင်းကျင်းလိုပါကလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Distributed by : The Eco Floor
အမှတ် (၉) ၊ ကွမ်းရွဲလမ်း(အောက်) ၊ ဈေးကြီးအနောက်ရပ်ကွက် ၊ ကြည့်မြင်တိုင် ၊ ရန်ကုန် ။
ဖုန်း - 09-454788801 /09-454788802/ 09-454788803
FB URL: https://www.facebook.com/VinylFlooringMyanmar/
ကြွေပြားသုံးမလား ပါကေးအစားထိုး ဒါသုံးလိုက်ကြမလား ? ထူးခြားဆန်းပြား ရေရှည်သုံးလို့ စိတ်ချရမယ့် ကြမ်းခင်းတွေရှာနေပါသလား ? ခု Special Order အတွက် ထုတ်ပေးထားတာကတော့ Luxury Condo Project (Area - 42000 sqf ) တစ်ခုအတွက် The Eco Floor မှ တာဝန်ယူပြီး Customer စိတ်ကြိုက် Customized Design Pattern ကို production လုပ်ပေးထားပါတယ် ။ ကြွေပြားအစားထိုး အဆင်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး ဆက်ကြောင်းညစ်ပတ်တတွေ ၊ ပြန်ကြွလာတာတွေ ၊ Slip ဖြစ်မှာတွေအတွက် စိတ်ပူစရာမရှိတော့ပါဘူး။ ကော်မလို ဘာဆိုဘာမှမလိုပဲ ချိတ်ဆက်စနစ်နဲ့ တန်းခင်းလို့ရပါပြီ ။ European Standard Premium Class မို့ ရေစိုခံသလို၊ ရေရှည်အတွက် အရည်အသွေး အာမခံချက်ရှိမှာကတော့ မလွှဲမသေပါပဲ ။ ဈေးနှုန်းဝန်ဆောင်မှုတွေ ခင်းပြီးဓါတ်ပုံတွေကို သိရှိလိုရင်တော့ ... https://www.facebook.com/1012272488861593/posts/2077408362347995/ ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော ကြမ်းခင်းအရည်သွေးများအပြင် ဆန်းသစ်မှုများကိုပါ ပေးအပ်ချင်လို့ The Eco Floor မှ အမြဲကြံဆဖန်တီး လုပ်ဆောင်ပေးနေလျှက်ရှိပါတယ် ။ Vinyl Floor နဲ့ ပက်သတ်ပြီး တစ်စုံတစ်ခုမေးမြန်းလိုခဲ့မယ်ဆိုရင် ရုံးချိန်တွင်း ဖုန်းဆက်မေးမြန်းနိုင်သလို ၊ Message box မှာလည်း အချိန်မရွေး မေးမြန်းနိုင်သလို Sample ပြဖို့နဲ့ Site survey ဆင်းဖို့အပြင် ဘာခင်းရမလဲ အကြံပြုချက်များလိုအပ်ခဲ့ရင်လည်း Marketing team မှ လာရောက်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ............ • ............. • ............. • ............. The Eco Floor - Vinyl flooring sales and installation Thailand No.1 Brand DYNOFLEX exclusived distributor in Myanmar No. 781 , ZarGa 18 street , (4) Ward, South Oakkalapa Township , Yangon Tel - 09 454788801 , 09 454788802 ,09 454788803 ............ • ............. • ............. • .............
ဘယ်လိုနေရာမှာ အသုံးပြုဖို့ ကြမ်းခင်းလိုနေပြီလဲ ? The Eco Floor မှာ Commercial use နဲ့ Home use တွေအတွက် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီး Premium class ကြမ်းခင်းတွေနဲ့အတူ Luxury life ကို ကောင်းမွန်စွာ ဖြတ်သန်းလို့ရပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါရစေ။ လတ်တလော Sepcial Sale ချထားတဲ့ Item တွေကတော့ ..... https://www.facebook.com/1012272488861593/posts/2062517777170387/ အခြားအမျိုးအစားနဲ့ ဈေးနှုန်းဝန်ဆောင်မှုတွေ ခင်းပြီးဓါတ်ပုံတွေကို သိရှိလိုရင်တော့ ... https://www.facebook.com/1012272488861593/posts/2077408362347995/ Vinyl Floor နဲ့ ပက်သတ်ပြီး တစ်စုံတစ်ခုမေးမြန်းလိုခဲ့မယ်ဆိုရင် ရုံးချိန်တွင်း ဖုန်းဆက်မေးမြန်းနိုင်သလို ၊ Message box မှာလည်း အချိန်မရွေး မေးမြန်းနိုင်သလို Sample ပြဖို့နဲ့ Site survey ဆင်းဖို့အပြင် ဘာခင်းရမလဲ အကြံပြုချက်များလိုအပ်ခဲ့ရင်လည်း Marketing team မှ လာရောက်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ............ • ............. • ............. • ............. The Eco Floor - Vinyl flooring sales and installation Thailand No.1 Brand DYNOFLEX exclusived distributor in Myanmar No. 781 , ZarGa 18 street , (4) Ward, South Oakkalapa Township , Yangon Tel - 09 454788801 , 09 454788802 ,09 454788803
LVT Gluedown - Glatino Series သန့်ရှင်းရေးလုပ် wax မတင်ရသေးခင် ဆောင်ရွက်နေဆဲ Ongoing အခြေအနေလေးပါ။
Happy Diwali....... ဒေပါဝလီနေ့ စီးပွားတိုးတက် ပျော်ရွှင်အေးချမ်းပါစေကြောင်း The Eco Floor မိသားစုမှ ဆုမွန်ကောင်းပို့သအပ်ပါသည် ။
Luxury Vinyl Flooring ထဲမှာမှ WPC ( Wood Plastic Composite) နဲ့ SPC (Stone Plastic Composite) ဆိုပြီး ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တွေ မတူသလို ပါဝင်တဲ့ အလွှာအရည်သွေးတွေလည်း ကွာခြားကြတဲ့ အမျိုးအစားနှစ်ခုရှိပါတယ် ။ ဒီအမျိုးအစားနှစ်ခုရဲ့ ခံနိုင်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွာခြားမှုကို စမ်းသပ်ပြထားတဲ့ Movie file လေး ဗဟုသုတအဖြစ် The Eco Floor မှ Sharing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ LVT ထဲမှာမှ Premium quality ရေစိုခံ SPC Click Type တွေလိုချင်ရင်တော့ ... The Eco Floor - Vinyl flooring sales and installation Thailand No.1 Brand DYNOFLEX exclusived distributor in Myanmar No. 781 , ZarGa 18 street , (4) Ward, South Oakkalapa Township , Yangon Tel - 09 454788801 , 09 454788802 ,09 454788803
Public area တွေမှာ ခြေလှမ်းမြန်မြန်နဲ့ သွားလို့ရပြီး အသံဆူညံမှုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့ Non-slip vinyl flooring တွေကို ကြွေပြားအစားထိုးခင်းမယ်ဆိုရင် .... ⚫️ ဆက်ကြောင်းတွေမရှိတဲ့အတွက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရလွယ်ကူပါတယ် ။ ⚫️ ပြုပြင်လဲလှယ်ရ လွယ်ကူလျင်မြန်ပါမယ်။ ⚫️ စိတ်ကြိုက်အရောင် ဒီဇိုင်းခင်းလို့ရပါမယ် ။ The Eco Floor - Vinyl flooring sales and installation Thailand No.1 Brand DYNOFLEX exclusived distributor in Myanmar No. 781 , ZarGa 18 street , (4) Ward, South Oakkalapa Township , Yangon Tel - 09 454788801 , 09 454788802 ,09 454788803
Vinyl floor နဲ့ Laminate ရဲ့ ကွာခြားမှုတွေ .. အားသာချက်နဲ့ အားနည်းချက်တွေ အကြောင်းအစုံအလင်သိချင်ရင်တော့ .... https://www.facebook.com/1012272488861593/posts/1795661993855968/ Vinyl floor အမျိုးအစားမျိုးစုံအကြောင်း အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကို အစုံလင်သိချင်ရင်တော့ ... https://www.facebook.com/1012272488861593/posts/1748682131887288/ အမျိုးအစားနဲ့ ဈေးနှုန်းဝန်ဆောင်မှုတွေ ခင်းပြီးဓါတ်ပုံတွေကို သိရှိလိုရင်တော့ ... https://www.facebook.com/1012272488861593/posts/1850100931745407/ ကြမ်းခင်းရွေးချယ်ခါနီး ဘယ်အချက်တွေကို သတိထားရမလဲဆိုတာကိုတော့ .... https://www.facebook.com/1012272488861593/posts/1849212291834271/ The Eco Floor - Vinyl flooring sales and installation Thailand No.1 Brand DYNOFLEX exclusived distributor in Myanmar No. 781 , ZarGa 18 street , (4) Ward, South Oakkalapa Township , Yangon Tel - 09 454788801 , 09 454788802 ,09 454788803
Ongoing project The Eco Floor - Vinyl flooring sales and installation Thailand No.1 Brand DYNOFLEX exclusived distributor in Myanmar No. 781 , ZarGa 18 street , (4) Ward, South Oakkalapa Township , Yangon Tel - 09 454788801 , 09 454788802 ,09 454788803
ရန်ကင်းမိုးကောင်း ကွန်ဒိုမှာ တပ်ဆင်ခင်းကျင်းပေးခဲ့တဲ့ Wood Series (Hetrogeneous Vinyl Glue-down) The Eco Floor - Vinyl flooring sales and installation Thailand No.1 Brand DYNOFLEX exclusived distributor in Myanmar No. 781 , ZarGa 18 street , (4) Ward, South Oakkalapa Township , Yangon Tel - 09 454788801 , 09 454788802 ,09 454788803
ရန်ကင်းက Office တစ်ခုလုံးမှာ Click type ခဲရောင်လေး ခင်းပေးခဲ့တာလေးပါ။ The Eco Floor - Vinyl flooring sales and installation Thailand No.1 Brand DYNOFLEX exclusived distributor in Myanmar No. 781 , ZarGa 18 street , (4) Ward, South Oakkalapa Township , Yangon Tel - 09 454788801 , 09 454788802 ,09 454788803
ONYX Bar မှာ တပ်ဆင်ခင်းကျင်းပေးခဲ့တဲ့ Stone Series (Hetrogeneous Vinyl Glue-down) The Eco Floor - Vinyl flooring sales and installation Thailand No.1 Brand DYNOFLEX exclusived distributor in Myanmar No. 781 , ZarGa 18 street , (4) Ward, South Oakkalapa Township , Yangon Tel - 09 454788801 , 09 454788802 ,09 454788803
ရွှေမန်းမြေက Private Hospital ကြီးတစ်ခုမှာ ခင်းပေးဖြစ်တဲ့ Premium Series (Homogeneous Vinyl Glue-down) The Eco Floor - Vinyl flooring sales and installation Thailand No.1 Brand DYNOFLEX exclusived distributor in Myanmar No. 781 , ZarGa 18 street , (4) Ward, South Oakkalapa Township , Yangon Tel - 09 454788801 , 09 454788802 ,09 454788803
ရွှေမိုးကောင်း ဆိုဒ် Luxury wood series ခင်းနေတာ လာစစ်နေတာပါ ။ The Eco Floor - Vinyl flooring sales and installation Thailand No.1 Brand DYNOFLEX exclusived distributor in Myanmar No. 781 , ZarGa 18 street , (4) Ward, South Oakkalapa Township , Yangon Tel - 09 454788801 , 09 454788802 ,09 454788803
Hotel site အား လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေး
Thailand Team မှ Vichaivech international hospital မှာ ခင်းပေးနေတာလေးပါ ။ The Eco Floor - Vinyl flooring sales and installation No. 781 , ZarGa 18 street , (4) Ward, South Oakkalapa Township , Yangon Tel - 09 454788801 , 09 454788802 ,09 454788803
New Design New Feeling New Texture foranew Dream ...... The Eco Floor - Vinyl flooring sales and installation No. 781 , ZarGa 18 street , (4) Ward, South Oakkalapa Township , Yangon Tel - 09 454788801 , 09 454788802 ,09 454788803
ရေအထိမခံတဲ့ ကြမ်းခင်းတွေနေရာမှာ အစားထိုးဖို့ First Class Vinyl Flooring လေးနဲ့ The Eco Floor မှ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။ The Eco Floor - Vinyl flooring sales and installation No. 781 , ZarGa 18 street , (4) Ward, South Oakkalapa Township , Yangon Tel - 09 454788801 , 09 454788802 ,09 454788803
Hotel တစ်လုံးရဲ့ Ongoing site လေးပါ ။ The Eco Floor က Installation team ရဲ့ လက်ရာသေသပ်မှုကြောင့် စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝ ရရှိခဲ့တာမို့ ပီတိဖြစ်ရပါတယ် ။ ကော်ကပ်အမျိုးအစား ခင်းကျင်းတဲ့နေရာမှာ ကြမ်းပြင်ညီညာမှုရှိဖို့က အဓိကျပါတယ် ။ ဒီအခန်းလေးကို အရင်ဆုံး ကြမ်းပြင်စက်စားပေးပြီး Cement coating ပြန်လိုက်ပြီး စက်ကော်ပတ်ပြန်စားပေးရပါတယ် ။ ဒီအဆင့်တွေပြီးစီးသွားမှ ဖုန်မှုံ့တွေသန့်ရှင်းပြီး ခင်းကျင်းပေးမှ နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ သက်တောင့်သက်သာရှိရပါတယ် ။ ပစ္စည်းဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း တပ်ဆင်မှုအပိုင်းမှာ အားနည်းသွားရင်လည်း ရေရှည်အသုံးပြုဖို့ အဆင်မပြေတာမို့ The Eco Floor က လူကြီးမင်းတို့နဲ့ Long term relationship ကိုသွားဖို့အတွက် လက်ရာပိုင်းကို အဓိကထားဆောင်ရွက်ပေးပါတယ် ။ The Eco Floor - Vinyl flooring sales and installation No. 781 , ZarGa 18 street , (4) Ward, South Oakkalapa Township , Yangon Tel - 09 454788801 , 09 454788802 ,09 454788803
Roll installation ပိုးမွှားပေါက်ဖွားခိုအောင်းခြင်းမရှိအောင် ဆေးရုံများတွင် အသုံးပြုသော Viny Roll Sheet များအား တပ်ဆင်ခင်းကျင်းရန် ဝန်ထမ်းများအား နည်းစနစ်မှန်ခင်းကျင်းနိုင်ရေးအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် သင်တန်းပေးခဲ့ပါသည်။